myanmar zodiac | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
myanmar zodiac	# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်Published March 3, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# နဂါးနှစ် လာပြီPublished January 29, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2012, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၂ ခု ဟောကိန်းများ, ၂၀၁၂ ခု ၁၂ရာသီခွင် အဟောများ, ၂၀၁၂ မြန်မာ ဗေဒင်	# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင်Published December 16, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# သူတို့တွေ လွတ်မြောက်ကြတော့မည်Published September 30, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ဇူလိုင်လ ဟောကိန်းများPublished July 5, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင် | 18 Comments	# 2010 (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများPublished December 31, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ | Tagged (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်း, burmese zodiac, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, myanmar zodiac, myanmar zodiacal horoscope, myanmar zodiacal signs, zodiac astrology, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၀ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ | 89 Comments	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,528)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,272)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,192)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,992)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,028)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,344)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,170)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,688)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,727)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,381)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,351)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,181)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,135)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,129)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,451)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,393)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (8,981)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,901)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,734)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,725)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,284)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,889)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,748)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,737)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,601)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,539)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,346)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,138)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,028)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,028)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !